Ciyaaryahannada Dhaawaca Iyo Ganaaxa Ku Seegaya Tartanka Champions League
HomeChampions LeagueCiyaaryahannada Dhaawaca Iyo Ganaaxa Ku Seegaya Tartanka Champions League
22/11/2016 Abdiwahab Ahmed
Salaasada iyo Arbacada waxay kooxuhu isku arki doonaan kulamadoodii afraad ee wareegga koowaad ee hormooyinka, waxaana la filayaa in kooxo ka badan 15 naadi ay xaqiijin doonaan in ay u gudbeen wareegga labaad ee 16-ka iyadoo hal ciyaar ahi ka hadhsan tahay qaybta hore.
Haddaba, waxay shabakadda ciyaaraha ee CADALOOL halkan ku soo bandhigaysaa ciyaartooyada ganaaxa iyo dhaawaca ku maqan kulamada caawa.
CSKA v Leverkusen: Kulankan muhiimka u ah labada kooxoodba, waxa dhaawacyo ku maqan ciyaartooyo badan. CSKA Moscow, waxa dhaawac iyo ganaax kaga maqan Cauņa, Pomazun, Eremenko, halka Leverkusen ay ka dhaawacan yihiin saddex ciyaartoy oo kaliya oo kala ah: Bender, Kiessling, Bellarabi.
Monaco v Tottenham: Waa ciyaar aad loo sugayo oo ay ku xidhan tahay natiijada kooxda Ingiriiska ah ee Tottenham, taas oo ay ku adkaatay in ay bandhig ciyaareed wanaagsan ku soo bandhigto tartanka Champions League. Monaco oo gurigeeda joogta ma jiraan ciyaartooyo ganaax kaga maqan ama ka dhaawacan, marka laga reebo Moutinho oo la sheegay in uu yara xanuunsanayo, balse laga yaabo in uu ciyaaro. Tottenham oo ku khasban inay badiso, waxa ka maqan dhawr ciyaartoy oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah Walker , Lamela, Alderweireld iyo Davies.
Borussia Dortmund vs Legia: Kooxda mar horeba u gudubtay wareegga 16-ka ee Borussia Dortmund, waxa ka maqan inta la hubo laba ciyaartoy oo kala ah S Bender iyo Burki oo dhaawac ah, laakiin waxa iyagana shaki ku jiraa oo duray iyo dhaawacyo fudud qaba, Schmelzer, Durm iyo Guerreiro, balse kooxda Legia mushkilad ma haysato, kaliya waxa ka maqan Moulin oo dhaawac ah.
Sporting CP vs Real Madrid: Kooxda Boortaqiiska ah ee Sporting, hal ciyaartoy oo kaliya ayaa ka maqan kaas oo ah Bruno Paz oo ganaax ah, balse Real Madrid waxa kulankan seegaya Casemiro, Kroos, Morata iyo Pepe.
København v Porto: København waxa ka maqan Cornelius iyo Santander oo labaduba dhaawac ah, halka Porto ay waayi doonto Layun iyo Ruben Neves oo iyaguna dhaawac ah.
Leicester v Club Brugge: Leicester oo marti loo yahay waxay tebi doontaa oo ka maqnaanaya Schmeichel, Mendy, Slimani iyo Chilwell, laakiin Club Brugge ayaan iyaduna ka liidanin, waxaanay waayeysaa Diaby, Engles iyo Vormer.
Sevilla v Juventus: Kooxda reer Spain ee martida loo yahay, dhamaan way u caafimaad qabaan ciyaartoygu, mana jiraan ganaaxyo ku dhacay, balse Juventus, waxay tebi doontaa Barzagli, Dyballa, Pjaca, Higuain iyo Benatia oo dhamaantood dhaawac ah.
Dinamo Zagreb v Lyon: Zagreb ayaa marti loogu yahay waddanka Croatia iyadoo ay ka maqan yihiin ANtolic, Lovren, Sosa, Soudani iyo Stojanovic oo dhaawac iyo ganaax isugu jira, laakiin Lyon saddexda ciyaartoy ee Mammana, Ghezzal iyo Jallet ayuun baa dhaawac ah.
Isco Oo Heshiis Cusub U Saxeexaya Real Madrid
25/04/2017 Abdiwahab Ahmed
Arsenal 3-3 Liverpool -All Goal and Highlights
Watch Chicago Cubs vs Washington Nationals – NLDS Game 3
10/10/2017 Abdiwahab Ahmed